Imithi Yesifo Sikashukela: Ukubuyekezwa Kwesifo Sikashukela > Ukwelashwa nokuvimbela
Imithi Yesifo Sikashukela: Ukubuyekezwa Kwesifo Sikashukela
Imithi isesigabeni sesithathu ekwelashweni kwesifo sikashukela sohlobo 2. Izigaba ezimbili zokuqala zisho ukudla okuphansi kwe-carb kanye nokuzivocavoca umzimba. Lapho zingasakwazi ukubhekana nakho, kuyasetshenziswa amaphilisi.
Kepha kwenzeka ukuthi amaphilisi awasebenzi, kulokhu, isiguli sinqunywe imijovo ye-insulin. Ake sixoxe kabanzi mayelana nokuthi uluphi uhlu lwemithi olunganikezwa namuhla kwabanesifo sikashukela.
Amaqembu Ezidakamizwa Zesifo Sikashukela
Ngokwesenzo sabo, izidakamizwa zesifo sikashukela zihlukaniswe ngamaqembu amabili:
Izidakamizwa ezikhulisa ukuzwela kwamangqamuzana kuyi-insulin ye-hormone.
Izinto zokwelapha ezivuselela ama-pancreas ukwandisa inani lokukhiqizwa kwe-insulin.
Kusukela maphakathi nawo-2000s, sekukhishwe izidakamizwa ezintsha zesifo sikashukela, ezibandakanya izidakamizwa zemiphumela ehlukile, ngakho-ke ngandlela-thile akunakwenzeka ukubahlanganisa. Ngenkathi lawa ngamaqembu amabili izidakamizwa ezinomsebenzi we-incretin, kodwa, ngokweqiniso, amanye azovela ngokuhamba kwesikhathi.
Kukhona amaphilisi anjenge-acarbose (glucobai), avimba ukumuncwa kwe-glucose emgodini wokugaya ukudla, kepha kuvame ukudala ukukhuphuka kokugaya ukudla. Kepha uma isiguli silandela ukudla okuphansi kwe-carb, khona-ke isidingo salomuthi siyanyamalala.
Uma isiguli singakwazi ukubhekana nokuhlaselwa yindlala futhi singakwazi ukulandela ukudla okune-carb ephansi, kufanele siphuze imishanguzo yesifo sikashukela, ongalawula ngaso isifiso sakho sokudla. Kusuka ku-glucobaia, umphumela okhethekile awubonwa, ngakho-ke, ingxoxo yayo eyengeziwe ayinangqondo. Ngezansi uhlu lwamaphilisi.
Lawa maphilisi kashukela adume kakhulu namuhla, avusa ama-pancreas ngamaseli e-beta.
Njengomuthi owedlule, uvuselela ama-pancreas ngamaseli we-beta, kepha aphansi kokuqala ngamandla. Kodwa-ke, isifo sikashukela sikhuthaza ukwanda okungokwemvelo kwe-insulin yegazi.
Lesi sidakamizwa sikashukela sisetshenziswa yiziguli ezinenkinga yezinso noma ezinye izifo ezihlangene.
Umuthi ungowesizukulwane esisha sezidakamizwa. Umphumela wayo uhlotshaniswa nokukhuthaza ukukhishwa kwe-insulin ye-hormone kusuka kumaseli we-beta gland. I-Amaryl isetshenziswa kaningi ngokuhlanganiswa ne-insulin.
I-Diabetes mellitus uhlobo 1 no-2 lubhekisa ezifweni ezinesifo se-metabolic, ngakho-ke umphumela wezidakamizwa, okokuqala, kufanele uhlose ukuletha izinqubo ze-metabolic zomzimba zibe ezijwayelekile.
Ngenxa yokuthi imbangela yesifo sikashukela sohlobo 1 ukufa kwamangqamuzana e-beta akhiqiza i-insulin, leli hormone kufanele liphathwe ngaphandle. Ukugeleza kwe-insulin emzimbeni kungaqinisekiswa ngomjovo noma ngokubuyela kumpompo ye-insulin. Ngesifo sikashukela esincike ku-insulin, ngeshwa, ayikho enye indlela yokwelashwa kwe-insulin.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 2, odokotela banquma izidakamizwa ezahlukahlukene ezisiza ukwehlisa ushukela wegazi. Asikho isidingo sokuthatha i-insulin kuleli qembu labanesifo sikashukela.
Thayipha imithi yesifo sikashukela sesi-2
Imithi yesifo sikashukela sohlobo 2 ingahlukaniswa ngezigaba eziningana. Yize kudingekile ngokushesha ukwenza ukubhuka ukuthi alikho ikhambi eliphelele lesifo sikashukela. Ngezindlela eziningi, impumelelo yokwelashwa kwesifo sikashukela ixhomeke:
kusuka ekuzimiseleni kweziguli ukulwa nalesi sifo ngokuqhubekayo,
kusuka kwendlela yeziguli.
Uma ukuvivinya umzimba nokudla kungakhange kube nemiphumela emihle, uchwepheshe unquma izidakamizwa zesifo sikashukela, ezihlukaniswe ngezigaba eziningana. Udokotela angabeka noma yisiphi isidakamizwa esisodwa noma inhlanganisela yezidakamizwa ezinamakilasi ehlukene.
Esikhathini sokuqala kwesifo sikashukela, i-a-glucosidase inhibitors isebenza kakhulu, isiza ukunciphisa ukumuncwa kweglue glucose. Ama-Derivatives we-sulfonylureas anqunywe, njengomthetho, lapho kuba nesidingo sokuvuselela ukucasulwa kwe-insulin ngamaseli e-beta.
Kepha le mishanguzo inezinto eziningi eziphikisana, ezibandakanya:
i-pancreaticabetes mellitus noma uhlobo 1 sikashukela,
zonke izinhlobo zokubonakaliswa komzimba.
Uma igazi lesiguli licebile ngokwanele ku-insulin, i-endocrinologist ingayalela isiguli ukuthi sithathe izidakamizwa zeqembu i-Biguanide. Le mishanguzo yesifo sikashukela ayikhuthazi ukukhiqizwa kwe-insulin, kepha yandisa umphumela wayo kwezicubu ezithambile.
AmaBiguanides anciphisa ukukhiqizwa koshukela isibindi, ukumuncwa kwawo ngamathumbu, isifiso sokudla. Kepha lapho ubamisa, kufanele kubhekwe imibango eminingi ehlukene:
ubunzima bezinkinga zesifo sikashukela, njll.
Ukusetshenziswa kwezithako zokudla zesifo sikashukela sohlobo 2
Ukuthatha amaphilisi anciphisa ushukela wegazi kushukela akunakugwenywa. Ngakho-ke, isiguli kuzofanela sivumelane neqiniso lokuthi ukusebenzisa nsuku zonke izidakamizwa konakalisa isisu, isibindi kanye negazi.
Kepha noma kunjalo kunethuba lokulungisa umthamo wamakhemikhali we-antidiabetic, uma uphathisa umsebenzi wokunciphisa ushukela ngezindlela zemvelo. Lokhu, yiqiniso, elikhathazayo ngohlobo 2 sikashukela esinga-insulin. Lapha kuyadingeka ukusebenzisa i-TC yegazi likashukela egazini, ngokwesibonelo.
Ezimweni eziningi, udokotela angakwazi ukwengeza ikhambi ngokudla ngokuthatha izithasiselo zokudla (izithasiselo ezisebenza ngokusebenza), ezisiza ukwehlisa izinga likashukela egazini. Labo ababheka ukuthi izithasiselo zokudla njengekhambi lesifo sikashukela banephutha.
Njengoba kushiwo ngenhla, okwamanje alikho iphesenti elilodwa lekhambi lalesi sifo. Noma kunjalo, izithasiselo zokudla zinezakhi zemvelo kuphela, lapho ekwelashweni okunesifo sikashukela sohlobo 2 kunomphumela obonakalayo kakhulu.
Isibonelo, i- "Insulat" iyisengezo sokudla, oku:
Iyanciphisa ukugcwala koshukela egazini ngokunciphisa ukumuncwa kwamathumbu.
Kuthuthukisa izinqubo ze-metabolic.
Kushukumisa ukucasuka kwamanyikwe.
Isiza ukunciphisa isisindo futhi iguqule izinqubo ze-metabolic.
Izithasiselo zingabekwa njengesidakamizwa esisodwa ukuvimbela isifo sikashukela sohlobo 2, futhi singaba yingxenye yokwakheka kwezinqubo zokwelapha. Ngokusetshenziswa isikhathi eside kwe "Insulin" ezigulini kukhona ukwehla okuzinzile kwenkomba ye-glycemic.
Ngokulandela ngqo isengezo sokudla kanye nohlobo lokudla, amathuba ezinga likashukela wegazi asondela kwizinkomba ezingelona isifo sikashukela ayanda.
Izinga likashukela elifanele
Esiswini esingenalutho 5.0-6.0 mmol / L.
2 amahora emva kokudla 7.5-8.0 mmol / L.
Ngaphambi kokulala 6.0-7.0 mmol / L.
Isidingo semijovo ye-insulin
Imvamisa, uma okuhlangenwe nakho kwesifo sikashukela kudlula iminyaka engama-5 ukuya kwengama-10, ukudla kanye nokuphuza imithi sekuvele akwanele. Kukhona ukwelashwa kwe-insulin okuhlala njalo noma okwesikhashana. Kepha udokotela angayala i-insulin kusenesikhathi uma ezinye izindlela zengehluleka ukulungisa izinga elikhulayo loshukela egazini.
I-insulin, njengendlela yokwelapha isifo sikashukela sohlobo 2, ngaphambili yabonwa njengendawo yokugcina. Namuhla, odokotela banamathela komunye umbono ohlukile.
Phambilini, iningi leziguli ezazi ukudla imishanguzo ezinesifo sikashukela zazinezinkomba eziphakeme ze-glycemic isikhathi eside, ezazibeka ingozi enkulu empilweni, futhi ngesikhathi sokuphathwa kwe-insulin, iziguli zase zinenkinga enkulu yesifo sikashukela.
Umkhuba wanamuhla wokwelapha isifo sikashukela ukhombisile ukuthi i-insulin ingenye yezidakamizwa ezisiza ukwehlisa ushukela. Umehluko wayo kumathebhulethi usendleleni yokuphatha (umjovo) kuphela kanye nentengo ephezulu.
Phakathi kweziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2, ama-30- 40% eziguli adinga ukwelashwa kwe-insulin. Ukuqala nokwelashwa kwe-insulin kungakanani futhi kunganqunywa kuphela yi-endocrinologist, ngoba konke kuncike ebuntwini bomzimba.
Ngingaphila impilo ephelele yesifo sikashukela?
Namuhla, umuntu onesifo sikashukela unamathuba onke okuvimbela ukuthuthukiswa kwezinkinga ezahlukahlukene futhi alondoloze impilo ephezulu. Iziguli zikhona izidakamizwa ezitholakalayo zemvelo yokwenziwa neyamakhambi, ukulungiswa kwe-insulin, abahlinzeki bokuzithiba nezindlela ezahlukahlukene zokuphatha.
Ngaphezu kwalokho, kuvulwe “izikole zesifo sikashukela,” ezifundisa abantu abanesifo sikashukela nemindeni yabo. Umsebenzi uhlose ukuqinisekisa ukuthi isiguli sazi okuningi ngangokunokwenzeka ngokugula kwakhe futhi sikwazi ukubhekana naso ngokuzimela, ngenkathi silondolozela injabulo yempilo ejwayelekile.
Inkinga enkulu ebeka izindlela zokunciphisa ushukela amathuba okuba ne-hypoglycemia. Ngakho-ke, kwezinye iziguli kunconywa ukuthi kugcinwe i-glycemia isezingeni eliphakeme, kuze kufike ku-11 mmol / l phakathi nosuku. Lokhu kuqapha kuzosiza ukuvikela ushukela omningi ukuba ungawi.
Ezimweni eziningi, ukwesaba kwe-hypoglycemia kuhaba futhi akunasisekelo, kepha izinga likashukela okufanele livimbele livame ukukhuphukela ku-10-15 mmol / l phakathi nosuku, okuyingozi enkulu kakhulu.